Meelaha sunta ah? Sidee Koox Hubaysan u Qaadatay Qalab Takhasus ah si loo Bedelo Siyaabaheeda
Network Pesticide Action Network
Network Pesticide Action Network (PAN) waa qayb ka mid ah shabakad caalami ah oo ka shaqeyneysa ilaalinta caafimaadka dadweynaha iyo bay'ada dhibaatooyinka sunta cayayaanka, iyo inay kor u qaadaan xeeldheeraanta iyo bulsho ahaanba cuntada iyo beeraha.
PAN waxa uu caqabad ku noqonayaa kordhinta caalamiga ah ee cayayaanka, wuxuu difaacayaa xuquuqda aasaasiga ah ee tayada caafimaadka iyo deegaanka, wuxuuna ka shaqeeyaa sidii loo hubin lahaa ku-beddelidda nidaamyada iyo wax-soo-saarka cuntada iyo beeraha. Iowa, PAN ayaa kor u qaadaya falanqaynta guud ee arimaha cayayaanka suntan iyada oo loo marayo barnaamijkooda Drift Catcher, kaas oo tabobaraya beeraleyda iyo dadka kale si ay u kormeeraan cayayaanka hawada ee hawada leh qalab sahlan. Waqti markii ay beeralayadu sii werwersan yihiin hirgelinta cayayaanka cusub ee loo yaqaan 'herbicides' oo la xidhiidha Dowda iyo Monsanto ee ugu dambeeyay ee abuurka abuuray, waxaa hadda jira 25 Iowa oo ku yaala Drift Catchers. Tani waxay soo bandhigtay marxaladda si toos ah ula shaqeysa wada-hawlgalayaasha isbaheysiga ee hindisaha hannaanka siyaasadeed ee dawlad-goboleedka si loo ilaaliyo beeralayda iyo beelaha miyiga ka soo jeeda cayayaanka.
PAN iyo xubnaha kale ee Isbahaysiga iyo Cuntada iyo Biyaha ee Ilaalinta ayaa saxiixay 20,000 codsi oo codsi ah McDonald intii lagu jiray shirkii saamilayda ee saamilayda ee St. Louis, Missouri.
Baradhada caadiga ah ee la soo saaray ayaa ah mid ka mid ah dalagyada cayayaanka ee ugu badan ee cayayaanka ee gobollada Dhexe. Sida ku qoran warbixinta 2012 ee 2012 Burburka Pesticides ee ka yimaada Minnesota Potato Fields, fungicides-u-ficil-nugul sida chlorothalonil - oo lala xiriiriyay kansar - ayaa caadi ahaan laga helaa agagaarka guryaha bulshada ku nool woqooyiga Minnesota. Sannadkii 2014, Qabanqaabiyaasha Xarunta Dhexe ee PAN ee Linda Wells iyo Lex Horan ayaa ka caawiyay Isbaheysiga Toxic Taters inay si rasmi ah u joojiso ololeheeda ah inay ugu yeeraan McDonald's inay ka soo saarto baradhada soosaarayaasha aan u soo bandhigin bulshada reer miyiga inay ku daadiyaan sunta.
PAN, sunta sunta sunta ah, iyo Cunto iyo Biyo Ilaalinta ayaa 20,000 codsi oo codsi ah u dhiibay McDonald inta lagu guda jiray shirka saamileyda ee saamileyda ee St. Louis, Missouri. Dadaalku wuxuu ku guuleystey ololaha Isbahaysiga Tacliinta Isbahaysiga ee Isbahaysiga Tiknoolajiyada si xeeladaysan u ah radiyaha McDonald. Isbahaysiga ayaa sidoo kale wadahadal rasmi ah la yeeshay RDO, oo ah soo saaraha ugu ballaaran ee baradhada baradho ah ee McDonald ee iibiyaha baradhada hoose. Qeyb ka mid ah cadaadiska dadwaynaha, RDO waxay ku dhawaaqday in ay ka baxayso isticmaalka chlorothalonil, oo ah fangas dilaac aad u badan, iyo saraakiisha Minnesota ayaa dhigaya brakes on ballaarinta la soo jeediyay ee waxsoosaarka baradhada RDO ee gobolka.